यौन स्वास्थ्य Archives - बडिमालिका खबर
अमेरिकाका धेरै व्यक्तिहरुमा यौन चाहाना घट्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । रिपोर्टका अनुसार यहाँ मानिसहरुमा यौन चाहाना हराउँदै गएको छ । लगभग ३० प्रतिशत व्यक्तिहरुले सर्भेका क्रममा कम्तीमा पनि एक वर्षदेखि यौनसम्बन्ध नराखेको बताए । अनुसन्धानकर्ताका क्रममा नेशनल सर्भे अफ फेमिली ग्रोथको सन् २०११ र २०१९ को डाटाहरु तुलना गर्दा अमेरिकी युवाहरुमा यौन चाहाना […]
डोटीमा पछिल्लो समय सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा अस्थायी साधनका रूपमा विकास हुन थालेको भन्दै यहाँका स्वास्थ्यकर्मी चिन्तित बनेका छन् । असावधानीका कारण गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्या बढेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी चिन्तित बन्ने गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय आइपासको आर्थिक सहयोग तथा जिल्लामा कार्यरत संस्था सामुदायिक विकास मञ्चद्वारा […]
के तपाईंले कहिलै आफू पुरुष भएकोमा ग्लानि वा लाज लागेको महसुस गर्नुभएको छ ? वा तपाईंले महसुस गर्नुभएको छ कि आफ्नो मर्द स्वभाव र त्यससँग जोडिएको व्यवहारले तपाईंलाई असंवेदनशील, मुर्ख या त्यसभन्दा पनि खराब त बनाइरहेको छैन ? तुलनात्मक रुपमा पुरुषको संख्या कम छ । तर, धेरैजसो दूर्व्यवहारको घटना, बलात्कारको घटना, थिचोमिचोको घटनामा पुरुषहरु दोषी […]
प्रेम, डेटिङ, रोमान्सको कुुरालाई हामी उस्तो महत्व दिदैनौं । तर, वैंशको मात चढ्दै जाँदा हामी सबैजसो यही चरणबाट गुज्रिन्छौं । प्रेम गर्नु, डेटिङ जानु जीवनका अनिवार्य हिस्सा होइनन् । यी कुराहरुलाई अलग राखेर पनि हाम्रो जीवन चल्छ । यद्यपि, वैंशालु उमेरमा हामीलाई विपरितलिंगी साथीसँग सम्बन्ध बढाउन मन लाग्छ । उनीहरुसँग नजिकिन मन लाग्छ । प्रेमिल […]
अनिच्छित गर्भ रहेपछि के गर्ने ? यसका केही विकल्प छन् । एक त, बच्चालाई जन्म दिने । दोस्रो गर्भपतन गराउने । गर्भपतनका लागि दुई वटा विधी प्रचलनमा छन् । पहिलो, म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए) गरिने गर्भपतन । अर्को, औषधिबाट । नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । खासगरी जटिल अवस्थामा वा बाध्यकारी अवस्थामा गर्भ रहेमा […]
अक्सर यौनका कुरामा हामी उति खुल्दैनौं । मनभित्रका कतिपय जिज्ञासा पनि मनमै दबाएर बस्छौं । जबकि जीवनकै एक अभिन्न पाटो हो, यौन । खासगरी दाम्पत्य सुखमा यौनले विशेष भूमिका खेल्छ । यौनलाई दम्पतीले सहज रुपमै स्विकारेका हुन्छन् र स्वभाविक क्रियाको रुपमा यसलाई लिने गर्छन् । तर, सबै दम्पतीको यौन जीवन सुखमय हुँदैन । उनीहरु यौनसँग […]
भनिन्छ जीवनमा एकपटक मात्रै विवाह गरिन्छ । विवाह गरेपछि वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन र राम्रो बनाउन मै बढी जोड दिइन्छ । वैवाहिक सम्बन्ध यस्तो सम्बन्ध हो जुन संसारका हर कोहिका लागि जीवनभरीको साथ हो । जसमा विश्वास र माया भरिएको हुन्छ । तर आधुनिक समाजमा विवाहको परिभाषा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । विवाहेत्तर सम्बन्धले धेरै वैवाहिक […]
विवाहपछि अधिकांशको सन्तान जन्माउने चाहना हुन्छ। तर सबै दम्पतीका लागि सन्तानको जन्म सामान्य हुँदैन। निकै प्रयासका बाबजुद पनि केही दम्पतीले सन्तानको सुख पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। अहिले नेपालमा पनि निःसन्तानपन ठूलै समस्याका रुपमा छ। यो समस्या वर्षेनी बढ्दो देखिन्छ। सामान्यताः कुनै पनि दम्पतीले प्राकृतिक रुपमा एक वर्षसम्म सन्तानको प्रयास गर्दागर्दै पनि नभए त्यसलाई निःसन्तानपन भनिन्छ। उमेर […]
प्रेमिकाको अचम्मको मागले तनावमा परेका एक युवकले रिलेशनशिप पोर्टलमा विशेषज्ञको मद्दत मागेका छन् । युवकले आफू पछिल्लो तीन वर्षदेखि निकै राम्री, होनहार र स्मार्ट युवतीसँग सम्बन्ध रहेको बताए । यद्यपि, ती युवा आफ्नी प्रेमिकाको एउटा बानीका कारण निकै तनावमा छन् । युवकले लेखे, ‘मेरी प्रेमिका निकै राम्रा बानीले भरपुर छिन् तर उनको एउटा अचम्मको बानी […]
जसरी राम्रो यौन जीवनले तपाईंको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, त्यस्तै खराब यौन सम्बन्धले यसमा नकारात्मक प्रभाव समेत पार्ने गर्छ । नराम्रो यौन सम्बन्धको मतलब यो होइन कि तपाई्ंहरू दुवै यौन सम्बन्धबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न । नराम्रो यौन सम्बन्धको मतलब दुई पार्टनरबीच लामो समयदेखि यौन सम्पर्क नराख्नु पनि यसको कारण हुन सक्छ । पार्टनरसँग सम्बन्ध निर्माणमा ढिलाइ […]
अमेरिकाको अटलान्टा क्षेत्रमा स्पा सेन्टरमा गोलीबारीको आरोपमा २१ वर्षका एक युवकलाई पक्राउ गरिएको थियो । यो गोलीबारीमा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । सोधपुछका बेला संदिग्ध आरोपीले प्रहरीलाई हमलाको पछाडि कुनै जातीय कारण त थिएन भनेर प्रश्न सोधेका थिए । रोबर्ट एरोन लाङ्ग नामका यी आरोपीले आफूलाई सेक्सको लत भएको र यसैकारण आफूले घटना घटित […]
कामसूत्रको नाम सुन्नेबित्तिकै मान्छेमा केही हिचकिचाहट र केही अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। यो वास्तवमै मान्छेको सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो । झण्डै २००० वर्ष पुरानो यो पुस्तक आफैँमा एउटा विषयको लागि पूर्ण छ । यो राम्रो र खुसी जीवनको लागि विशेष छ । यसले यौन जीवनमा कसरी ऊर्जा, सन्तुष्टि र आनन्द प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा ज्ञान […]
यौन शिक्षाले यौनको सबै पहलहरूको बारेमा बताउँछ । यसमा यौनसँग जोडिएका भावनाहरु, जिम्मेवारीहरु मनुष्यको शरीरको रचना, यौन क्रियाकलाप, प्रजननता, यसको लागि सही उमेर, सुरक्षित यौन, जन्म नियन्त्रण वा यौनमा संयम जस्तो विषयहरुको बारेमा विस्तारसँग बताउने गरिन्छ । यसरी शिक्षाको लागि स्कुलमा चल्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वा परिवारको अभिभावकहरूद्वारा पनि कतिपय अवस्थामा सिकाउने गरिन्छ । पहिले […]
कुरा अनौठो र भड्किलो लाग्न सक्छ । किनभने हामीकहाँ यौ७ नको कुरा गर्नसाथ हामी लाजले खुम्चन्छौं । हामीलाई लाग्छ, यौन भनेको छा,डा कुरा हुन् । यही भ्रमित मानसिकताले हामी यौ७ नको बारेमा खुला चर्चा गर्दैनौ, यौनको उन्मुक्त आनन्द लिदैनौं । अध्ययनहरुले भन्छ, यौन सुख नै दाम्पत्य सफलताको प्रभावकारी सूत्र हो । तर, हाम्रो यौन जीवन […]
त्यसो त दम्पतीबीचको झगडा उनीहरुमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले बालबच्चा र समग्र परिवारमा पनि असर गर्छ । झगडा गरिरहने आमाबुवाका सन्तान क्रोधित मात्र हँुदैनन्, हीनताबोधले ग्रस्त हुन्छन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीच किन झगडा हुन्छ ? यसका एकमात्र कारण हुँदैन । अनेक कारणले दम्पतीबीच खटपट आइरहन्छ । ठिक यसैगरी झगडाको पनि प्यार्टन हुन्छ । दम्पतीबीच हुने झगडा कुन […]
३० वर्षका एक युवकको मृत्यु भएको छ । उनको मृत्युको कारण अचम्मको छ । भारतको महाराष्ट्रमा एक युवकको यौन सम्बन्धका बेला महिलाले कुर्सीमा बाँधिदिँदा मृत्यु भएको छ । भारतीय समाचार एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार एक प्रहरी अधिकारीले महिला विवाहित भएको उनको युवकसँग अफेयर चलेको थियो । महिला एक सन्तानकी आमा पनि हुन् । बिहिबार सँगै रात […]
कुनै पनि चिजको लत एक किसिमको मानसिक विकृति हो । यसैगरी यौनको लत अर्थात् बार-बार यौनको बारेमा सोचिरहनु या कुनै पनि महिलालाई देख्ने बित्तिकै उत्‍तेजित हुनु पनि मानसिक समस्या हो भन्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । एक शोधका अनुसार जो मान्छेले यस मामलामा आफैँले आफैँलाई काबुमा राखेको हुँदैन उसले आफैँलाई नोक्सानी ब्यहोराएर बसिरहेको हुन्छ । मनोवैज्ञानिकहरू यस […]
सुजिता परियारको यो पहिलो गर्भ हो। उनको गर्भ सात महिनाको भइसक्दासम्म उनलाई खासै समस्या झेल्नुपरेन। तर पनि नियमित गर्भको र आफ्नो स्वास्थ्यको परीक्षणमा रहेकी सुजिताले चिकित्सकले सुझाएका औषधि नियमित सेवन गर्दै आएकी छिन्। पछिल्लो समयमा उनलाई दिसा साह्रो तथा कडा भएकाले समस्या हुन थालेको छ। हुन त उनलाई पहिले पनि कहिलेकाहीं दिसा कडा हुने हुन्थ्यो […]